Home News Faahfaahin:-Qarax ka dhacay Dulleedka Kismaayo
Faahfaahin:-Qarax ka dhacay Dulleedka Kismaayo
Sida ay sheegayaan Wararka Muqdisho Online ka heleeyso Deegaan dhaca Dulleedka Magaalada Kismaayo ayaa waxaa ay sheegayaan in halkaasi qarax lagula eegtay Ciidamo ka Tirsan Kuwa Maamulka Jubbaland
Qaraxan oo nuuciisa uu ahaa miinada dhulka lagu aaso ayaa wuxuu haleelay gaari Cabdi Bile ah oo ka ambabaxay magaalada Kismaayo, kuna sii jeeday degaanka Cabdalle Biroole, wuxuuna qaraxa qabsaday gaari ay saarnaayeen ciidanka Jubbaland.
Xarakada Al Shabaab ayaa sheegtay masuuliyadda qaraxan lagu bartilmaameedsaday ciidanka Jubbaland, waxayna tilmaameen inay khasaare xooggan gaarsiiyeen ciidanka Jubbaland.
Saraakiisha ciidamada maamulka Jubbaland ayaa waxa ay sheegeen inay ku daba jiraan raggii ka dambeeyay weerarkan, waxayna tilmaameen khasaaraha dhankooda soo gaaray inuu yahay mid kooban.
Previous articleAabaha dhalatay Gabadh Muqdisho lagu dilay oo sheegay in Farmaajo u balanqaaday!!
Next articleCiidamo ku Dgaalamay Cadaado!!
Madaxweyne Ku-xigeenka Maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan Oo Ka Hadlay Dhibaatooyinka...